#IAm26 : Taratasy Misokatra Manome Aingam-Panahy Ny Malayziana Hanohitra Ny Tsy Fahazakana Ara-Pivavahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Desambra 2014 8:58 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , বাংলা, Español, Nederlands, 日本語, English
Fanorenana goavan'ny departemantan'ny Praiminisitra ao Malayzia. Sary Flickr avy amin'i pratanti (CC License)
Mpiasam-panjakana ambony teo aloha dimy amby roapolo tao Malayzia no nanasonia taratasy misokatra iray mandrisika ny governemanta mba hitarika fifanakalozan-kevitra am-pilaminana momba ny fampiharana ny lalàna islamika ao amin'ny firenena. Nahazo fanohanana nieli-patrana ny taratasy, indrindra fa avy amin'ny an'ireo izay mahatsapa fa miha-miakatra ao Malayzia, firenena anjakazakan'ny Silamo ity, ny tsy fahazakàna ara-pivavahana.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, mpitarika matanjaka avy ao amin'ny fiaraha-mitantana mitondra ao Malayzia no nahomby tamin'ny fametrahana ny lalàna Islamika nahitatra sy hentitra ao amin'ny firenena. Nanetsika fitaovam-panjakana ihany koa izy ireo hanoherana ny raisina ho fandrahonana ny finoana silamo.
Nanangana olana maro ny miompana amin'ny zavatra eritreretiny fa tafahoatra sy ny tsy ara-drariny amin'ny fampiharana ny lalàna Shariah amin'ny endrika maro eo amin'ny fitantanam-pitondrana ny taratasy:
Manondro manokana ny toe-draharaha ankehitriny izay ahitana rafitra ara-pivavahana hita ho mampihatra fahefana mihoatra noho ny andraikitra tantaniny izahay ; izay ahitana famoahana fatwa samihafa mandika ny Lalàmpanorenana Federaly sy manimba ny fomba demaokratika sy fakan-kevitra ny shura [fandraisana fanapahan-kevitra]; izay ahitana ny fiakaran-danjan'ny fikambanana tsy miankina mpihevitra ho faratampony miampanga ny feo manivaka ho manohitra ny Islam, manohitra ny fitondram-panjaka ary manohitra Malay ka nanao ezaka maro hanasarotra ny fifanakalozan-kevitra sy ny famahana ny fifandirana; ary ny tena zava-dehibe, izay ahitana ny fampiasana ny lalànan'ny fikomiana mihantona ho toy ny loza mitatao lalandava hampanginana na iza na iza manana hevitra mifanohitra.
Niangavy ny Praiminisitra Najib Razak ry zareo “hijoro amin'ny fomba fitarihany manokana” ka “hampajaka ny adihevitra misokatra sy kabary mirindra momba ny fitantanana ny lalàna Islamika ao amin'ity firenena ity.” Nampian'izy ireo:
Amin'ny maha-miozolomana anay dia tianay kokoa ny lalàna islamika noho ny lalàna sivily, mba hahazoana ny fenitra ambony indrindra amin'ny rariny satria io no lazaina fa taratry ny rariny araka an'Andriamanitra. Noho izany, hoan'ireo izay miasa amin'ny anaran'ny Islamo amin'ny alalan ‘ny fitantanana ny lalàna Islamika dia tsy maintsy hitondra ny andraikitra mampiseho fa tontosa ny rariny, ary hita fa vita.
Nalaza vetivety ilay taratasy ary nanome aingam-panahy ireo feon'ny “tony fihetsika” hafa sahy nitabataba nanameloka ny fanavakavahana ara-pivavahana sy ara-poko. Miisa 93 ny fikambanana tsy miankina nanambara fanohanana ny mpiasam-panjakana ambony 25 efa misotro ronono. Nanatevin-daharana azy ireo ihany koa ny Filankevitra Bodisma, Kristiana, Hindoisma, Sikhisma ary Taoisma Malayziana, izay nidera ny vondrona tamin'ny fandrafetana ny taratasy.
Nampiasain'ny Malayziana maro ho fanehoana firaisankina amin'ny “25 miavaka” ny diezy Twitter #KamiJuga25 (izahay koa 25) . Nisy fanangonan-tsonia # KamiJuga25 ihany koa mivezivezy ao amin'ny Change.org:
Tsy afaka ary tsy mahazo mijoro amim-pahanginana izahay ka hamela ny fampiasana diso ny finoana ho fitaovam-piadiana mba hanafoanana ny tsy mitovy hevitra milamina, lahateny sy hevitra ara-tsaina ka hampahory ireo izay mihaika sy manohana fijoroan-kevitra mifanohitra. Tena tsy ara-drariny ary tsy tokony andeferana na oviana na oviana handefitra ny fampiasana ny finoana hampisarahana antsika.
Misy fanangona-tsonia iray an-tserasera malaza kokoa nampiasa ny diezy “I am #26” [izaho no faha-26] ho fanohanana ny fijoroana noraisin'ny vondron'ny 25 “amin'ny fijoroana miaraka ho firaisankina ho toy ny #26 [faha-26].”
Avy ao amin'ny ‘izaho no faha-26′ mankany amin'ny ‘#KamiJuga25′, Mierona mafy kokoa ny Feon'ny Fampitoniana
Justin Ong avy ao amin'ny gazety an-tserasera Malay Mail Online namahavaha ny nataon'ny vondrona ho be herim-po sy mety indrindra:
Be herimpo satria tonga amin'ny fotoana iheverana ny fotoana sy ny zavatra rehetra ho mandrisika hampikomy, na tsy miraharaha, rehefa miala amin'ny lalany ny olona ka mahita fanafintohinana amin'izay tsy niniana, na ny ratsy kokoa, tsy misy akory.
Mety satria misy ampahany ao amin'ny firenena izay hita mikasa na manaiky fitsipika hentitra kokoa momba ny fivavahana noho ny antony zara raha mifandraika amin'ny fitiavana fivavahana ka tsy miraharaha izay mety ho vokany hafa.
Zurairi AR, avy ao amin'ny Malay Mail Online ihany koa, nanome ako ny fanontaniana natsangan'ny Malayziana sasantsasany tamin'ny vondron'ny 25:
Nahoana no ankehitriny? Nahoana no tsy talohan'ny nivoahan'i Malayzia tamin'io lalana io?
Saingy mankatoa ihany koa izy amin'ny maha-zavadehibe sy ny fiantraikan'ny taratasy nalefa tany amin'ny governemanta :
Tsy vitan'ny hoe mandray anjara amin'ny fanomezana ireo fomba fijery hafa manohitra ny mpandala ny mahazatra ry zareo, fa manao ny heviny ihany koa hampisongadina ny fijeriny noho ny sata ijoroan'izy ireo.
Rehefa misy olona toy ny olona ambony 25 sahy miteny, dia mandefa hafatra izay tsy vitan'ny hoe azo ekena ny fomba fijery, fa misy ihany koa ireo olona mihaja ao ambadik'izy ireo.
Niteraka adihevitra momba ny anjara toeran'ny fivavahana sy ny fitantanam-pitondrana ao amin'ny fiaraha-monina ilay taratasy misokatra. Antenaina fa handrisika ny fandaniana ny fanavaozana amin'ny fampiharana ny lalàna Islamika ao Malayzia izany.